Ngangifuna ngempela ukubona ke isikhathi eside futhi isikhathi eside ukuba zibuze umbuzo "Kungani kuyiqiniso ningabhaka lezi amakhekhe multivarka?" Emva, icala labe selihlehliselwa amasonto kamuva, ngagcina nginqume ukuba ulinge futhi uthole impendulo. Lapho sathola umshini multivarku, ngahlatshwa umxhwele nge ezihlukahlukene nemisebenzi, ngaphezu uhlelo evamile ukupheka irayisi. Namuhla, iningi lalezi amadivayisi labo abazokwazi ekhishini umpheki isobho, sikadali, steamed, izinto ezibhakiwe, kodwa selibe mina bamangala kakhulu. Umama wayekungabaza ukuthenga, baqiniseka ngokugcwele in lokuthi ngathengisa idivayisi alunamsebenzi. Phela, kwakunzima kimi ukukholelwa ukuthi kwelinye imbiza kungenziwa kuphekwe izitsha eziningi kangaka ezahlukene. Njengoba yayifuna kunina ukuthi wayeshaye eceleni, ngabhaka kakhulu chocolate cake e multivarka futhi manje ukwabelana iresiphi nawo wonke umuntu.
Ake sibheke izithako. Asidingi lutho kodwa imikhiqizo elula futhi ezingabizi:
200 of ibhotela unsalted;
250 g ushukela oluyimpuphu;
ufulawa 70 g;
350 g eliphezulu ushokoledi, elicibilikile seyizolile.
Indlela ukupheka ikhekhe best multivarka
Indlela silula. Okokuqala, shisisa ekamelweni lokushisa 160 C. Uma unquma ukuzama leresiphi kuhhavini ke bagcobe isidlo baking nge ububanzi 20 cm. Kepha ukupheka, ngangikujabulela multivarka, kwangithatha kuphela ukusakaza amafutha kancane phezu ekamelweni.
Isinyathelo esilandelayo ukuze ancibilike chips ushokoledi. Kungcono ukwenza lokhu kusengaphambili, kangangokuthi wayengesabi isikhathi sokwehlisa umoya. Kungani uthele chocolate hot ngqo phezu izithako base ikhekhe? Ngokwenza kanjalo, ngenxa yalokho, uzibeka engcupheni yokudala inhlama lumpy, njengoba amaqanda ngokushesha ngaphansi okushisa aphakeme.
Ukuze Ncibilikisa chocolate, awuhlahlele izitho ezincane kakhulu futhi kancane kancane ingxubevange kwi kubhayela double. Ngemva kokuthola iziqu ngebhizinisi, qala ukuhlolwa ikhekhe. Uzodinga yenza bhotela noshukela mass ulula futhi enomoya. Uma ufika kule ukungaguquguquki, qala yanjalo engeza ufulawa amaqanda, ngokuqhubeka ugovuze kahle. Ekugcineni, uthele ushokoledi selehlile ku mass okuholela uhlanganise kahle.
Manje, uma inhlama usulungile, ungakwazi ukubhaka ikhekhe lakho e multivarka. Vele wafaka eziningi ikhamera bese usetha umsebenzi oyifunayo. Cindezela inkinobho futhi uqale inqubo ukupheka.
Uma bayobhaka kuhhavini, bese uthele ingxube isidlo ukubhaka. Yibeke imbiza nge umthamo wamanzi: ketshezi kufanele sifinyelele cishe kuya phezulu nodonga lwawo. isikhathi sokupheka kuyoba amahora mayelana nengxenye.
Ukuze ubone ukuthi ikhekhe usulungile e multivarka, ibhoboze kuye phakathi ne skewers eside. Uma uphuma ahlanzekile, sekuyisikhathi ukuthatha ikhekhe.
imiphumela emihle kakhulu
Ngenxa yalokho, ngenza ikhekhe multivarka ohlonipheka kakhulu: nibonakala ke wabheka emihle, kodwa ukunambitheka wafika ukukuthanda wonke umndeni. Zama ukwengeza omisiwe iresiphi noma walnuts ukuze uthole dessert mnandi nakakhulu. Thumela ikhekhe nge ice can ukhilimu, kakhukhunathi, amajikijolo noma ophehliwe.
Indlela ukupheka lecho esheshayo futhi esihlwabusayo ekhaya
Uke wazama ujamu Mint?
Lasekuqaleni isidlo kuthebula iholide: umlenze iwundlu, kubhakwe kuhlanganiswe nanoma imifino
Ingabe ubuhle bunemithetho? Isigaba segolide nesiSmmetry
Ukushaja isikole ngendlela playful